Industry Qatar Pearl
by ULily Verna, uMncedisi oXhasayo
Imbali yePearl Diving eQatar
I-Pearl diving yayinye yamashishini angundoqo aseQatar kude kube ngama-1940, xa ioli ithathe indawo. Emva kokuba yinkampani enkulu yendawo kwiminyaka eminyaka, ukuhamba ngeeparele kwakuyi-professional decaying nge-1930s, emva kokuqaliswa kweeparari zaseJapan kunye ne-Depression Depression eyenza i-pearl diving inzuzo. Nangona i-pearling ayisona shishini elikhulayo, lihlala liyingxenye ethandekayo yeCatat culture.
Imbali kunye nokuyehla kweCandelo loPhando
Iiparele zazixabiswa kwihlabathi la mandulo, ngakumbi ngama-Arabhu, amaRoma kunye namaYiputa. Le mimandla yayixhaswe ngokubanzi ngoshishino elithandekayo kwiPersian Gulf, kunye nabahlukahlukeneyo beeparele basebenzela nzima ukuqhubeka kunye neemfuno eziphezulu kumaqabane aseYurophu, e-Afrika naseMiddle East.
I-Pearl diving yayiyingozi kwaye ihlawula ngokomzimba. Ukungabikho kwe-oksijeni, ukutshintsha okukhawulezayo kwingcinezelo yamanzi, kunye neentlanzi nezinye izidalwa zasolwandle zenza i-pearl diving ingumsebenzi onobungozi. Nangona kunjalo, nangona kunjalo, ixabiso eliphakamileyo leeparele lenza i-pearl diving umsebenzi ozuzayo.
Xa iJapan yakha iifama ze-oyster phakathi kwe-1920s ukuvelisa iiparele ezikhushulayo, iimarike zeeparele zazaliswa. Ukongezelela, ukuza kweNtlupheko Enkulu kwiminyaka ye-1930 kwabhubhisa intengiso yeparele njengoko abantu babengasenayo imali eyongeziweyo yezinto zokunethezeka ezifana neeparele.
Ngeemarike zeeparele ezomileyo, kwaba ngummangaliso kumntu waseQatari xa i-oli yafunyanwa ngo-1939, iguqula indlela yabo yobomi.
Iiparele zenziwe njani
Iiparele zakhiwa xa into yangaphandle ingena kwiigobolondo ze-oyster, mussel, okanye enye i-mollusk kwaye ibanjwe. Le nto inokuba yiproasite, ingqolowa yesihlabathi, okanye iqela elincinci, kodwa ngokuqhelekileyo yinto yokutya.
Ukuzikhusela kwi-particle, i-mollusk ikhupha iindawo ze-aragonite (i-caleralum carbonate) kunye ne-conchiolin (iprotheni).
Ngaphezulu kwexesha elimibini ukuya kwiminyaka emihlanu, le miqolo yakha kwaye yakha iparele.
Kwi-oyster kunye nemissels yamanzi amanzi, i-nacre (unina weparele) unikela iiparele zazo zendalo. Iiparele ezivela kwezinye iilluski zine-porcelain-like texture kwaye zingakhangeli njengeeparele ezine-nacre.
I-Qatar yindawo epheleleyo yokufumana iiparele ezintle, ezibomvu. Ngenxa yamanzi amaninzi amaninzi amanzi, amanzi ayingxenye yetyuwa kunye nenxalenye entsha, indawo efanelekileyo yokwenza i-nacre. (Amaninzi amaninzi amanzi avela kwi-Shatt al Arabhu.)
Iiparele ezikhutshweyo zilandela inkqubo efanayo yokubumba njengeeparele zendalo, kodwa zidalwe phantsi kweemeko ezilawulwa ngokucophelela kwifama leparele.
Ngokuqhelekileyo, abadobi bee-pearl baseQatar bahamba ngeendlela zokuhamba ngeenqanawa zonyaka nge-Juni-Septemba. Kwakukho uhambo olude (iinyanga ezimbini) kunye nohambo olufutshane (iintsuku ezingama-40). Iinqanawa ezininzi ezithandwayo (ngokuqhelekileyo zibizwa ngokuthi "ihowhow") ziqulethe amadoda angama-18-20.
Ngaphandle kwekhnoloji yanamhlanje, ukuhamba ngeeparele kwakuyingozi kakhulu. Amadoda awazange asebenzise iitank zomoya; Esikhundleni salokho, baqhawula iingubo zabo ngeenkuni zokhuni baze baphefumula baze bafike emibini imizuzu.
Kwakhona babehlala begqoka isigxobo esenziwe ngesikhumba ezandleni zabo nasezinyaweni ukuzikhusela kwiindawo ezisematyeni ezifumaneka ngezantsi.
Emva koko bawuphosa intambo ngedwala eliboshwe ekupheleni ukuya emanzini uze ungene.
Laba bantu babedla ngokubhukuda ngaphezu kweenyawo ezili-100 ngaphantsi, ngokukhawuleza basebenzise ijezi okanye idwala ukuze batye i-oyster kunye nezinye iimbumba ezinqabileyo zamatye okanye umgangatho waselwandle, kwaye ubeke i-oysters kwisigxobo seentambo ababebethelele entanyeni zabo. Xa bebengeke baphinde baphephe umoya wabo, i-diver iyakudonsa intambo kwaye iyakhuphuka iphinde ikhuphe kwisikhephe.
Umthwalo wabo wee-mollusk wawuza kuhlaselwa emkhombeni weso nqanawa kwaye baza kuphinda badibelele ngaphezulu. Iintlobo ziya kuqhubeka le nkqubo kwimihla.
Ebusuku, ii-dives zaziya kwaye ziza kuvula zonke ii-oyster ukujonga iiparele ezixabisekileyo. Baya kuhamba ngamawaka ama-oyster ngaphambi kokufumana enye iparele.
Asikho yonke idiza eyahamba kakuhle, nangona kunjalo. Ukudibanisa okunzulu kuthetha ukuba utshintsho olukhawulezayo kwingcinezelo lunokubangela iingxaki ezinzulu zonyango, kubandakanywa iintsimbi kunye namanzi angenanto.
Kwakhona, abahlukahlukeneyo bebengabikho bodwa phantsi. I-Sharks, inyoka, i-barracudas kunye nezinye izilwanyana zasemanzini zazixhaphake emanzini kufuphi naseQatar, kwaye ngezinye izihlandlo zihlasele iintlobo.
Icandelo lokubhabhisa iiparele lafumana nzima nakakhulu xa ii-colonial tycoons zibandakanyeka. Baya kuxhasana nohambo oluthile kodwa bafuna ihafu yenzuzo. Ukuba kwakukho uhambo oluhle, bonke babe nobutyebi; ukuba kwakungenjalo, ke abo bahlukileyo babeza kuba netyala kumxhasi.
Phakathi kokuxhatshazwa kunye nemingcipheko yempilo ebandakanyekayo kunye nabantu abahlukeneyo, abahlali bephila ubomi obunzima kunye nomvuzo omncinci.
I-Pearl Diving Culture kwiQatar namhlanje
Nangona i-pearl yokuloba ayibalulekanga kubume boqoqosho baseQatar, ibhiyozelwa njengenxalenye yeCatat culture. Iingqungquthela zonyaka zokuphanga iiparele kunye nemibhiyozo yenkcubeko.
Umncintiswano we-Senyar pearl kunye nokuloba ukhuphiswano olusandul 'ukuza kubakho ngokugqithiseleyo ngaphezu kwe-350 abathathi-nxaxheba, ukuhamba phakathi kweFasht neKatara Beach kwiinqanawa zendabuko.
Umcimbi wonyaka we-Qatar Marine ngumcimbi wamahhala ongawuboni nje ukubonakalisa iiparele kuphela kodwa nomboniso wecwina, amanzi okudansa, ukutya, umdlalo womculo ophambili kunye negalufa elincinane. Umcimbi omnandi wokuba iintsapho zifunde ngeenkcubeko zazo kwaye zihlekise kwakhona.
Imbali yelizwe elidala leYugoslavia
Ziziphi Amazwe AnamaJebane Awona Makhe Awona Makhelwane?
IBhunga loKhuseleko loMbutho weZizwe
IYurophu YaseYurophu: Imbali kunye neNgxelo
Ukudibanisa uLwandle Olubomvu kunye neMeditera
Amazwe e-G8: Amandla aphezulu eQoqosho loQoqosho
I-Commonwealth of Nations
I-Geography Timeline: 13 Iimpawu eziphambili ezitshintshe iMida ye-US
I-Warsaw Pact History kunye namalungu
Indlela yokutshintsha iifayile zePlayer Plug
Iimpawu ze-Element kumagama e-Element
Indlela yokuvusa u-Muse wakho
Valence Inkcazo kwiKhemistry
Imbali yeeAplane kunye neNqwelo
U-Ethan Allen: Inkokeli yeGreen Mountain Boys
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yeeNqatha ezisixhenxe (Fair Oaks)
I-Facebook ivaliwe ngokulondolozwa ngoFebhuwari 29, 30, 31?
IQumrhu leeNgcaciso zeKomiti yeeNgcaciso
Khetha, Khetha, kwaye Ukhethiweyo
Imivuzo yabaSebenzi baseCanada
Imfazwe YaseMerika Yomntu: Inkulu Jikelele uJoseph Hooker
Ngumhla wokuzalwa kaBuddha?
Naruto Series Series kunye neNkcazo yeNdaba
I 47 Indaba kaRonin
Indlela Yokumelana Nesilingo
Indlela yokuTlola kwiGalofu
Iintlobo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zeClefs
Inyaniso Ngomxholo Wemizi YeCarmen Winstead
Indlela yokuqhubeka kunye neKholeji yokuFunda
I-Información idibanisa i-cent centro de detención de migrantes e Texas
Ngaba unokuqiniseka ukuba ufuna ukuzithoba?
Iyintoni ilitye leCriststal yelityu?